श्रीलंकाका जेलमा २६ नेपाली महिला : कसरी त्यहाँ पुगे, कसले पुर्यायो ? - CNN EXPRESS
श्रीलंकाका जेलमा २६ नेपाली महिला : कसरी त्यहाँ पुगे, कसले पुर्यायो ?
काठमाण्डौ । संगठित मानव तस्करको जालोमा परेर खाडी देश जान भन्दै हिँडेका २६ महिला श्रीलंकाका विभिन्न जेलमा परेपछि महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालयले उद्धारको प्रक्रिया सुरु गरेको छ । मन्त्रालयले यसअघि नै संगठित मानव तस्करको फन्दामा परेर जेलमा परेका १० महिलालाई उद्धार गरी परिवारसँग भेट गराइसकेको छ ।
स्थलमार्ग हुँदै भारतका विभिन्न सहरबाट अवैध रुपमा खाडीका देश पुर्याएर आकर्षक जागिर मिलाइदिने आश्वासनमा श्रीलंका पुर्याएर अलपत्र पार्ने मानव बेचबिखनको शैली नयाँ होइन । यो समाचार आजको कान्तिपुर दैनिकमा प्रकाशित छ ।
Previous: बन्धक बनाएर बलात्कार : आरोपितले स्विकारिसके तर उजुरी दिन उमेर पुगेन
Next: विघटन गर्दा तत्कालै, अधिवेशन बोलाउँदा बिस्तारै